Kugadzirira kweIELTS | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
KUGADZIRA KWAZVOIELTS CHOKWADI
Svitsa budiriro paIELTS bvunzo kuburikidza nekuraira uye kutungamirirwa maitiro
KUGADZIRA KWAZVOIELTS GADZIRIRA KURE
ELTS ndiyo inozivikanwa pasi rose yemhando yepamusoro yechirungu mutauro kugona kwevanyori vevadzidzi, vanobva kune dzimwe nyika uye nehunyanzvi zvinangwa.
Iyo BLI IELTS bvunzo yekugadzirira kosi ichakubatsira iwe kuvandudza yako yakawanda kushandiswa kweChirungu nepo ichikubatsira iwe kuwana zvakanakisa mhedzisiro inobvira paIELTS bvunzo.
IELTS inogamuchirwa souchapupu hweruzivo rwechirungu mutauro wekudzidza, basa uye kutama. Bvunzo dzeIELTS dzinozivikanwa nenhamba huru yemayunivhesiti eBritish, Canadian, Australia, Malta uye South Africa, uye mune dzakawanda, dzidzo yekuAmerica.
Iyo BLI IELTS bvunzo yekugadzirira kosi inoitirwa kukubatsira iwe kugadzirira iyo mana module eIELTS bvunzo ukuwo uchibatsira vadzidzi kuvandudza kwavo kwese kushandisa Chirungu. Aya makirasi akagadzirwa aine tarisiro yekuvandudza mumwe nemumwe mutauro mutauro (kuverenga, kuteerera, kutaura, kunyora) ukuwo ichipa vadzidzi dzidziso yezuva nezuva uye mukana wekuita kwakakosha matekinoroji nemaitiro.
Isu tinopa makosi emazinga akasiyana.
Tora mucherechedzo unobudirira paunenge uchitora bvunzo dzeIELTS.
Tora chinzvimbo chakabudirira paunenge uchitora iyo TEFaQ bvunzo.
Tora imwe-pane-imwe kirasi nemumwe wevadzidzisi vedu vanokwanisa.